Iran: Kabarin’i Ahmadinejad Tao Amin’ny Oniversiten’i Columbia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Janoary 2018 15:21 GMT
Vakio amin'ny teny Português, عربي, Español, English
Nanjary lohahevitra mafana tao amin'ny media manerana izao tontolo izao ny kabarin'ny filoham-pirenena Iraniana, Mahmoud Ahmadineajd tao amin'ny Oniversiten'i Columbia ao New York sy ny teny mafy ary ny tsikera nataon'ny filohan'ny onivesite Lee C. Bollinger nandritra ny fanamarihany tamin'ny Alatsinainy 24 Septambra. Bilaogera Iraniana sy Amerikana maromaro no naneho hevitra momba ity tranga ity. NikAhang Kosar, mpanao sariitatra malaza sady bilaogera, namoaka sariitatra maromaro momba ity lohahevitra ity.
Dave Burdick sy mpianatra vitsivitsy tao amin'ny Oniversiten'i Columbia kosa nanangana bilaogy antsoina hoe “Ahmadinejad at Columbia” mba hanangonana fitantarana momba ny zava-nitranga. Namoaka sary marobe misy ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fitsidihan'i Ahmadinejad tany Columbia ny bilaogy.
“Tsy misy pelaka ao Iran”
Toy izao ny lahatsoratra ao amin'ny bilaogy Ahmadinejad at Columbia:
Nihevitra ny mpianatra sasantsasany fa amin'ny fitsidihana an'i Columbia, dia nahazo fotoana fanampiny hiresahana amin'ny haino aman-jery ilay mpandà fisian'ny Fandripahana (Jiosy), fa tsy nahazo mpanohana hafa vaovao amin'ny fomba fijeriny mampiahiahy. Araka ny voalazan'ny mpianatra iray avy amin'ny biomedicine, te “hiseho ho madio” sy “afaka manodikodina ny karazana, fomba fijery liberaly ankapoben'ny olona marobe tao amin'ny faritry ny oniversite” i Ahmadinejad tamin'ny fisorohana tsy hamoaka ny tsy fankasitrahany ny fahapelahana ao Iran sy ny Fandripahana. Ny hafa kosa nifantoka tamin'ny fahaizan'ny filoha miala amin'ny valim-panontaniana. “Tsy namaly tsara fanontaniana maro izy, fa nanao izay fanaon'ny mpanao politika rehetra ka tsy dia manana fanajana azy aho tsy tahaka ny fanajako an'i Bush na Cheney”, hoy i Mehmet Bozatli, sivy amby roapolo taona- mpianatra avy any Torkia. Araka ny nambara nandritra ny forum androany, mihevitra ny filohan'i Iran fa tsy misy pelaka ao amin'ny fireneny. “Ao Iran, tsy manana pelaka tahaka ny ao amin'ny firenanareo izahay,” hoy izy, nitarika fihomehezana sy ngonongonona teo amin'ny mpanatrika.
Iranian Truth nilaza fa toa tsy nijery CBC manokana mitondra ny lohateny hoe Tontolon'ny Pelaka Miafiana ao Anatin'i Iran i Ahmadinejad.
Tsy misy Fahalalaham-pitenena ho anay
Karim Orghandehpour, bilaogera sady mpanao gazety, nilaza [Fa] fa nanao hetsika fampielezan-kevitra momba ny fahafahana nomena an'i Ahmadinejad mba hiresaka amin'ny iray amin'ireo oniversite malaza indrindra manerantany ny fampahalalam-baovaom-panjakana, ary miaro ny zony amin'ny fahalalaham-pitenenana izy ireo. Manontany ity bilaogera ity hoe nahoana no tsy nomena zo mitovy amin'izany any Iran ireo akademika Iraniana. Manontany ihany koa izy hoe nahoana ireo fikambanana sasany no tsy omena zo hamoaka gazety.
View from Iran nanoratra hoe
Nampanantena izy omaly fa hanasa mpampianatra sy mpianatra any Columbia ho any Iran mba hilaza izay tiany holazaina. Nahoana izy no tsy manome tahaka izany ho an'ireo mpampianatra sy mpianatra Iraniana? Ny fihainoana azy miresaka momba ny tsy fisian'ny demaokrasia sy ny zon'olombelona any andrefana dia fomba iray hafa hisorohana ny tena zava-misy ao Iran. Atoa Filoha, maty ho an'ny zon'olombelona fototra sy ho an'ny demaokrasia fototra ny Iraniana.
Mpandresy sy Resy
Ataloha Mahejerani, minisitra reformista teo aloha, nitsikera ny fanamarihan'i Lee Bollinger momba an'i Ahmadinejad ary nilaza fa gaga izy nandre fa miantso ny filoha Iraniana ho mpanao didy jadona masiaka sy fetsifetsy ny filohan'i Columbia. Miantso ny tenin'i Bolliger ho fanevatevana, nilaza koa ity minisitra teo aloha ity fa tian'Andriamanitra hanome fahafahana vaovao ho an'i Iran izany kabary izany, ka i Israely sy ny filohan'i Columbia no resy.
Mifanohitra amin'i Mohajerani, nilaza i Jomhour [Fa] fa ny vahoaka Iraniana no tena resy eo am-pelatanan'ny politikan'i Ahmadnejad. Manontany an'i Mohajerani ilay bilaogera hoe firy amin'ireo Amerikana no heveriny fa mino ny tenin'i Ahmadinejad, ary nanampy koa fa mahatsapa ny laingany amin'ny ambaratonga lalina ny vahoaka Iraniana. Nilaza i Jomhour fa rehefa miresaka momba ny zon'ny vehivavy i Mohajerani, dia tokony hotsaroantsika ny sazy an-tranomaizina napetraka ho an'ny vehivavy mpikatroka, ary rehefa milaza ny soatoavina akademika izy, dia tokony hahatsiaro ireo mpianatra nampijaliana tany Iran isika.
“Mety ho lasa namana i Etazonia”
Harfeh Hesab milaza [Fa] fa ny tena zava-dehibe amin'ny hafatr'i Ahmadinejad ho an'ny Etazonia dia izao: afaka ho tonga namana akaiky an'i Iran i Amerika. “Nanampy ilay bilaogera fa” nanontaniana ny filoha Iraniana raha vonona ny hifampiraharaha amin'i Etazonia i Iran ary inona no zavatra andrasana. Namaly izy fa afaka ho tonga namana akaiky an'i Iran i Etazonia. “Nanoratra i Harfeh Hesab fa ity no hafatra tena tsara indrindra nalefan'ny Repoblika Islamika ho an'i Etazonia hatramin'izao.
Mpitondra fivavahana Tezitra
Mpianatra ara-pivavahana ao Madresyeh Ma nanoratra [Fa] taratasy misokatra ho an'i Ahmadinejad ary nanakiana ny lahateniny tao Columbia. Milaza amin'ny filoha Iraniana ity bilaogera ity fa mety hihevitra izy fa nahomby tao Columbia, kanefa nahafahan'ny filohan'ny oniversite ao Columbia hanompa azy ny fanatrehany, izay ompa amin'ny Iraniana rehetra koa. Miampanga an'i Ahmadinejad amin'ny fametrahany ny tetika politikany ho ambony noho ny fanajana ny fireneny. Manampy ilay bilaogera fa, mifanohitra amin'ny kabarin'i Ahmadinejad, tsy misy fahasamihafana eo amin'ny governemanta Amerikana sy ny vahoakany.